ကုန်ကြမ်း Estradiol အမှုန့် (50-28-2) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အမျိုးသမီးဟော်မုန်း / Estradiol အမှုန့်စီးရီး / Estradiol အမှုန့်
SKU: 50-28-2. Categories: Estradiol အမှုန့်စီးရီး, အမျိုးသမီးဟော်မုန်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Estradiol မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (50-28-2) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Estradiol အီစထိုဂျင်တစ်ပုံစံ, အသားဥအိမ်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်အမျိုးသမီးလိင်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အီစထိုဂျင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအများအပြားဖြစ်စဉ်များအဘို့လိုအပ်ပေသည်။ ဤသည်ဆေးဝါးအမျိုးသမီးဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ (ထိုကဲ့သို့သောပူတောက်အဖြစ်, မိန်းမအင်္ဂါခြောက်သွေ့) သွေးဆုံးလက္ခဏာတွေလျှော့ချကူညီရန်အမြိုးသမီးမြားအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဤရွေ့ကားလက္ခဏာတွေလျော့နည်းအီစထိုဂျင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်စေလျက်ရှိသည်။
ကုန်ကြမ်း Estradiol အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 173 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 179
စတီရွိုက်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Estradiol အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
Estradiol (CAS 50-28-2) (E2), အစ oestradiol စာလုံးပေါင်းတစ် Steroid တစ်မျိုးတစ်ဦးအီစရိုဂျင်နှင့်မူလတန်းအမျိုးသမီးလိင်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Estradiol အမှုန့်အသုံးပြုမှု
ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့သတ်မှတ်ထားသည့်ခံခဲ့ရသည်အတိအကျအဖြစ် estradiol ယူပါ။ သင့်ရဲ့ဆေးညွှန်းတံဆိပ်ပေါ်မှာရှိသမျှလမ်းညွန်ကိုလိုက်နာပါ။ ပိုကြီးတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်ပမာဏသာရှိသို့မဟုတ်အကြံပြုထက်ပိုရှည်အဘို့ဤဆေးဝါးမယူပါနှင့်။
ကုန်ကြမ်း Estradiol အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
သငျသညျရှိပါကသင်ဟာ estradiol မသုံးသင့်တယ်: အသည်းရောဂါ, တစ်ဦးသွေးထွက်ရောဂါ, ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်အင်္ဂါသွေးထွက်, (ယင်းကဲ့သို့ရင်သား, သားအိမ်, သားအိမ်, ဒါမှမဟုတ်သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာကဲ့သို့) တစ်ဦးဟော်မုန်း-မှီခိုကင်ဆာသမိုင်း, ဒါမှမဟုတ်သင်အစဉ်အဆက်နှလုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါလျှင် , လေဖြတ်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသွေးခဲ။
ကုန်ကြမ်း Estradiol အမှုန့်ညွှန်ကြားချက်
အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဆေးညွှန်းများနှင့် over-the-counter ဆေးဝါးများ, ဗီတာမင်နှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်အပါအဝင် estradiol နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ယခုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်အားလုံးဆေးဝါးနှင့်သင်စတင်ရန်သို့မဟုတ်သုံးပြီးရပ်တန့်မဆိုဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ်ဦးချင်းစီပြောပြပါ။
ဤစာရင်းတွင်ပြည့်စုံနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ estradiol နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်မပေးပါ။ သင်အသုံးပြုအားလုံးဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။ ဒီအညွှန်း, Over-the-counter, ဗီတာမင်နှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်။ သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြခြင်းမရှိဘဲအသစ်တခုဆေးဝါးမစတင်ပါနဲ့။
ကုန်ကြမ်း Estradiol အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ Estradiol အမှုန့် (CAS 50-28-2) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
AAS ကုန်ကြမ်းအမျိုးသမီးမျိုးပွားတစ်ရှူးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့သန့်ရှင်းစင်ကြယ် 99% Estradiol ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။
Estradiol ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း
Megestrol acetate အမှုန့်
Mifepristone အမှုန့် (84371-65-3)
Nifuratel အမှုန့် (4936-47-4)